Indlu yeholide yasePõhja Tooma Kapteni
Suuresadama, Hiiu County, Estonia
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguPõhja
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uPõhja iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
UMNIKELO OWODWA NGEKRISMASI KUNYE NOBUSUKU OBUKA KUNYAKA OMTSHA!
Jabulela iiholide kwindawo ezolileyo, enokuthula eHiiumaa! Unikezelo lubandakanya yonke indlu yeeholide yabucala ukuya kuthi ga kwi-8 yabantu, i-sauna efudunyezwe kwangaphambili kwindlu eyahlukileyo ngobusuku obunye I-PLUS sauna kunye neziselo. Ixabiso ngobusuku obunye yi-euro ezingama-200, ubusuku obubini 300 euros.
Ungasifumana kwiFBook: Põhja Tooma majutus Hiiumaal
Indlu ebanzi enembono entle ukusuka kwibalcony ukuya kuthi ga kwi-8 abantu. Kukho amagumbi amabini okulala, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nendawo yokutyela, igumbi lokuhlala elineebhedi ezi-2 zomntu omnye.
Ungasebenzisa i-barbeque ukuba ube nesidlo esimnandi ngaphandle.
Nceda uyiphathe indlu ngokungathi yeyakho. Akutshaywa endlini. Ungatshaya ngaphandle.
Indawo yethu ifanelekile kubantu abaxabisa indalo, ukuthula kunye nomoya omtsha. Kukho indawo eninzi yokubaleka abantwana, kwanebala lokudlala, itrampoline, ibhola yevoli kunye nebala lebhola ekhatywayo.
Ngokuthatha uhambo lwemizuzu eyi-10 uya kuba kulwandle olunesanti apho unokonwabela ukuqubha okanye ukunyuka ehlathini.
Umbuki zindwendwe ngu- Põhja
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Suuresadama